Huawei na-ezube ịmalite HarmonyOS dị ka onye nnọchi gam akporo na 2021 | Site na Linux
Ọchịchịrị | | Emelitere na 15/09/2020 02:38 | Noticias
Ekwuputara ya na August 2019, mbata nke HarmonyOS na ekwentị Huawei na-aghọ nke doro anya. N'ezie, na ụbọchị mbụ nke HDC (Huawei Onye Mmepụta Ọgbakọ), ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ọ na-ezube ịmalite sistemụ arụmọrụ nke HarmonyOS dị ka onye dochie anya gam akporo na ekwentị gị na 2021 iji merie ihe mgbochi ndị United States na-eweta.
Ọzọkwa yana mgbasa ozi mwepụta nke mbụ beta nke Harmony OS 2.0 SDK maka elekere amamịghe, redio ụgbọ ala na telivishọn na nke abụọ maka smartphones ga-amalite na December.
Huawei webatara HarmonyOS na HDC 2019 ma webata ya dị ka ikpo okwu nke ọtụtụ ngwaọrụ nke na-akwado elekere, laptọọpụ, na smartphones, karịa onye na-ama ụdị ya na sistemụ arụmọrụ gam akporo Google.
Dabere na ndị nyocha, ọ bụ Huawei kacha nwee ihe ịga nke ọma na gam akporo, mgbe agbakwunyere ya na ndepụta aha US na Mee 2019, na-egbochi Google ịnye nkwado teknụzụ maka sistemụ gam akporo na ọrụ mkpanaka nke Google (GMS) na ekwentị ọhụrụ ha.
Huawei kwupụtara nke abụọ nke HarmonyOS na nkọwa nke atụmatụ iji gbanwee ya na ngwaọrụ dịgasị iche iche, gụnyere ngwaọrụ sitere na ndị nrụpụta ama ama ndị ọzọ.
“Nzọụkwụ anyị na-eme bụ na anyị na-akwado ngwaọrụ Huawei site na HarmonyOS 2.0, mana n’otu oge, HarmonyOS 2.0 nwekwara ike ịdị maka ngwaọrụ sitere n’aka ndị ọzọ na-eweta ya. HarmonyOS 2.0 ga-adịrị ndị na-emepụta ngwaike niile, ”ka Wang Chenglu, onye isi oche nke ngalaba ngwanrọ Huawei kwuru.
Akụkụ nke abụọ nke nkwupụta Wang O nwere ike ịbụ ihe kpatara nchegbu maka Google dịka Huawei kwuru n'ụzọ doro anya na ọ dị njikere ịlụ ọgụ na ya.
Ma ọ bụrụ na usoro a nwere ihe ịga nke ọma, ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke China ma ọ bụ Asia nke na-atụ egwu mmegwara n'ọdịnihu site na United States nwere ike ịkwado ịkwadebe ekwentị ha na sistemụ arụmọrụ a.
Nrụgide America ọ ga - eduga onye ike Android? N'oge a, ọ nweghị ihe na-enye ohere igosipụta ya, n'ihi na anaghị ebido HarmonyOS. Usoro mwepụta chọrọ ntọhapụ nkebi abụọ.
Site na ụbọchị mbụ nke HDC, Huawei na-eme ụdị beta nke HarmonyOS 2.0 SDK maka ndị mmepe. Betadị beta a ga-akwado elekere smart, redio ụgbọ ala na telivishọn.
Smartphonedị smartphone nke SDK ga-eso na Disemba 2020, na Richard Yu, onye isi oche nke ndị ahịa azụmaahịa nke Huawei, kwuputara na ekwentị na HarmonyOS nwere ike ịpụta n'afọ ọzọ. Nkwupụta ọzọ sitere n'aka Huawei dọtakwara uche taa.
Companylọ ọrụ ahụ na-ebido ọrụ OpenHarmony ya, oru ngo na na-enye ndị mmepe ohere ịtụkwasị obi ụdị mmeghe nke sistemụ arụmọrụ, yiri ihe AOSP bụ maka gam akporo. Dị ka ọ dị taa, ọrụ ahụ na-akwado ngwaọrụ nwere naanị 128MB nke RAM ma ọ bụ obere, mana oke nchekwa a ga-agbada na 4GB na Eprel 2021 wee wepụta ya na Ọktoba 2021.
Ndị nyocha kwuru na HarmonyOS bụ ọrụ dị mkpa maka Huawei.
O nwere ike ịbụ ihe mgbochi megide mmachi na-egbochi nnukwu ndị China ịme azụmahịa na ụlọ ọrụ US.
Ka ọ dị ugbu a, a manyere Huawei ịbupu ekwentị gam akporo ya na-enweghị ọrụ Google, na-emetụta ngwa ngwa ya na arụmọrụ ya maka ndị ọrụ na-abụghị China.
Ọzọkwa, GMS ọzọ bụ Huawei Mobile Services (HMS), nke dịka Yu si kwuo bụzi nke atọ kachasị ukwuu ngwa ọdịnala nke ụwa na ụwa mgbe App Store na Google Play Store.
Zhang Pingan, onye isi oche nke Huawei Consumer Cloud nke Huawei, gbakwunyere, na-ekwu na ndị ahịa si mba ofesi na-anabata HMS na ahịa nke ekwentị HMS ejirila "rịa elu" kemgbe Mee.
Yu kwuru na ụlọ ọrụ ahụ zigara nde ekwentị 240 afọ gara aga, na-enweta ya nke abụọ na ahịa na 2019, ma kwukwara na ụkọ ngwanrọ emetụtawo ahịa na ọnwa ndị na-adịbeghị anya na mbupu. ọ gbadara ruo nde 105 nde na ọkara mbụ. Mana enwere nsogbu ndị ọzọ maka Huawei.
N’ọnwa Ọgọstụ, United States gbatịrị mmachi ndị gara aga iji gbochie Huawei ịnwe ndị ọkụ ọkụ semiconductors na-enweghị ikikere pụrụ iche.
Ndị nyocha kwuru na azụmahịa ekwentị nke Huawei ga-apụ kpamkpam ma ọ bụrụ na ọ nweghị ike ijide ibe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Huawei na-ezube ịhapụ HarmonyOS dị ka onye nnọchi gam akporo na 2021
Achọpụtara ọtụtụ adịghị ike mgbe ị na-enyocha ihe nchekwa Docker